उत्तर प्रदेशमा अस्पतालमा अक्सिजन बाँड्ने युवक पक्राउ | Khash Khabar
गृह उत्तर प्रदेशमा अस्पतालमा अक्सिजन बाँड्ने युवक पक्राउ
उत्तर प्रदेशमा अस्पतालमा अक्सिजन बाँड्ने युवक पक्राउ
१९ बैशाख २०७८, आईतवार ०४:५६
भारत उत्तरप्रदेशको जैनपुरस्थित सरकारी अस्पताल बाहिर अक्सिजनबिना तड्पिरहेका बिरामीलाई निजी खर्चमा अक्सिजन दिने एक युवकलाई प्रहरी पक्रेर मुद्दा चलाएको छ। कतिपयले यसलाई राहतकर्मीलाई स्तब्ध बनाउने घटनाको रूपमा लिएका छन्।
तर यस सम्बन्धमा प्रहरी अधिकारीको भनाइ भने अर्कै छ। जैनपुरका प्रहरी अधिकारी मनीष बर्मा भन्छन्, ‘ती युवकले अस्पताल बाहिर अव्यवस्था सिर्जना गरेर स्वास्थ्यकर्मीलाई दुःख दिइरहेका थिए, त्यसैले पक्राउ गरिएको हो।’ उनले कसैलाई पनि बिनाकारण दुःख दिने नियत प्रशासनको नभएको पनि बताएका छन्।
पक्राउ पर्ने युवक जैनपुर कोतवालीका विक्की अग्रहरी हुन्। उनीविरुद्ध भारतीय दण्ड संहिताको धारा १८८ र २६९ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यो मुद्दा जैनपुरका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारीको उजुरीको आधारमा गरिएको हो।
विक्कीले भने अक्सिजन नपाएका बिरामीको पीडा देख्न नसकेर आफ्नै एम्बुलेन्समा रहेको अक्सिजन सिलिण्डर निकालेर बिरामीलाई दिएको बताउँछन्।
बिरामीलाई सहयोग गर्नेलाई पक्रिएर मुद्दा चलाउँदा प्रशासनको छविमा नकारात्मक असर पर्दैन र? भन्ने जिज्ञासामा प्रहरी अधिकारी बर्मा भन्छन्, ‘ती युवकले अस्पताल बाहिर बिरामीहरुलाई अक्सिजन दिएर भिडियो बनाइरहेका थिए। जबकि त्यो समयमा अस्पतालमा बेडहरू खाली थिए। ज–जसलाई अक्सिजन दिइएको थियो, ती सबैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।’
बर्मा भन्छन्, ‘हाम्रा अधिकारी र मेडिकल स्टाफहरु पनि आफ्नो ज्यान खतरामा राखेर काम गरिरहेका थिए। उनीहरुले मिडियामा स्थान पाउँदैनन् तर जब कुनै नकारात्मक खबर आउँछ, त्यसलाई उचालिन्छ । यसबाट अधिकारीहरुको मनोबल गिर्छ।’ उनको दाबीअनुसार जैनपुरमा स्थिति धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा छ। हाल अक्सिजन र बेडको अभाव छैन।
को हुन् विक्की?
३४ वर्षीय विक्की पेसाले एम्बुलेन्स चालक हुन्। उनले भनेका छन्, ‘मेरो एम्बुलेन्समा दुईवटा अक्सिजन सिलिण्डर थिए। दुई साताअघि मैले श्रीमतीको सुन बेचेर चार अक्सिजन सिलिण्डर किनेको थिएँ। दुई सिलिण्डर मलाई दानमा प्राप्त भएको थियो । मैले हालसम्म एक सय जना बिरामीलाई अक्सिजन सहयोग गरिसकेको छु।’
उनका अनुसार अक्सिजन अभावका बीच उनले प्रतिसिलिण्डर २० हजार (भारु) को दरले किनेका थिए।
बिहीबारको एक घटना स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘म एम्बुलेन्समा एक गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल लिएर गएको थिएँ। एम्बुलेन्समा अक्सिजन सिलिण्डर थियो। त्यहाँ धेरै बिरामी अक्सिजन नपाएर हैरान भएका थिए। उनीहरूलाई भर्ना गर्न समय लागेको थियो। मैले उनलाई आफ्नो एम्बुलेन्सबाट अक्सिजन दिएँ। जब मैले एकजना बिरामीलाई अक्सिजन दिएँ, तब मसँग अक्सिजन माग्नेहरुको भिड नै लाग्यो।’
सहयोगीहरूको आवाज दबाउन प्रयास?
पूर्व ब्यूरोक्रेट सूर्य प्रताप शाही, उत्तर प्रदेश सरकारको कोविड नीतिहरूका आलोचक भन्छन्, सरकार सहयोगीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको छ।
उनले भने, “यूपी सरकारले परिस्थितिलाई स्वीकार्न चाहँदैन। यो नागरिकलाई सबै कुरा ठीकै हो भन्ने भ्रममा राख्न चाहान्छ। तर अस्पताल बाहिरका मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ, सरकारले यो सत्य लुकाउँदैन। मुद्दा दायर भईरहेको छ। यस झगडामा रहेको मुद्दा। तीन वटा मुद्दा पनि मेरो विरुद्धमा दर्ता गरिएको छ तर त्यस्ता मुद्दाले कुनै फरक पार्ने छैन। जसलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो तिनीहरू बाहिर आउँदछन् र मद्दत गर्दछन्। “
शाही भन्छन्, “अस्पताल निर्माण गर्नु, बेडको संख्या बढाउनु, अक्सिजन प्रदान गर्नु जरुरी थियो। सरकारले यस दिशामा प्रयास गरिरहेको छ, तर संकट यति ठूलो छ कि धेरै भएको छैन,” शाही भन्छन्।
# अक्सिजन अभाव